Fanampim-baovao avy amin'ny Talen'ny Fiarovana ny Praiminisitra sy ny Tale jeneralin'ny Polisim-pirenena | Primature
Fanampim-baovao avy amin’ny Talen’ny Fiarovana ny Praiminisitra sy ny Tale jeneralin’ny Polisim-pirenena
15 septembre 2018 3 octobre 2018
Manoloana ny resaka samihafa izay miely taorian’ny lozam-pifamoivoizana nitranga nahakasika ny andiana fiara (cortège officiel) nitondra an’ Andriamatoa Praiministra lehiben’ny Governemanta omaly hariva.
Ny Fiadidiana ny fiarovana ny Praiministra (Direction de Sécurité de la Primature) sy ny Polisim-pirenena dia mirary mba hitohy hihatsara hatrany ny fahasalaman’ireo zaza naratra.
Mitondra koa izao fampahafantarana izao mba hialàna indrindra amin’ny hevi-diso ateraky ny tsy fahalalana ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana, ho fiarovana ireo tompon’andraiki-panjakana ambony voasokajy manokana araka ny lalàna.
I- Ny lehiben’ny andrim-panjakana manan-jo misitraka ireo fepetra manokana momba ny fiarovana ireo.
Ny dia rehetra ataon’ireo tompon’andraiki-panjakana ireo dia raisina mandrakariva ho fihetsehana ofisialy (déplacement officiel) mampihetsika avy hatrany ireo fepetra fiarovana : fiara sy moto mpitari-dàlana (voitures ouvreuses et d’escorte), anjomara (sirènes), jiro mirehidrehitra (gyrophares) sy mitsitapitapy (feux de détresse), ary ny hafainganam-pandehan’ny andiana fiara rehetra. Tafiditra ao anatin’izany ihany koa ny fanajàna ny maha–matihanina tanteraka ireo mpitandro filaminana voakasika.
Midika izany fa laharam-pahamehana avy hatrany ny andiana fiara lehiben’ny andrim-panjakana (cortège officiel) mba ahafahana mampihatra ireo fepetram-piarovana manokana takiana ireo. Ny iraka ampanaovana ny tompon’andraikitry ny fiarovana amin’ireny fihetsehana ofisialy ireny dia ahafahany mandray ny fepetra rehetra tsy hampikatso ny fiara, ary araka ny voalazan’ny lalàna dia mihantona avokoa ny toro-marika mahazatra amin’ny lalànan’ny fifamoivoizana mandritra iny fotoana andalovan’ny andiana fiara iny, ohatra ny fidirana « sens interdit » raha ohatra ka tsy maintsy ilaina.
Ho fanajàna ny paikam-piarovana (procédures de sécurité) mihatra amin’ny fihetsehana ofisialy araka izany dia ny talen’ny fiarovana no mamaritra ny lalana sy ny zotra arahin’ny olom-panjakana arovana, ary tsy manana ny teny ambarany mihitsy io olom-panjakana io ao anatina andiana fiara tahaka ireny, tsy azony atao ny mijanona na mivoaka ny fiara na manao ahoana na manao ahoana. Ny fepetra voalohany noraisin’ny tompon’andraikitry ny fiarovana tamin’ny fotoana nisian’ny lozam-pifamoivoizana omaly dia ny hitondrana haingana ireo zaza naratra teny amin’ny hopitaly, saingy ny zava-nisy dia nosakanan’ireo olona teo tsy afaka nihetsika ilay fiara saika hampiasaina ho amin’izany, ka voatery nitady fomba hafa haingana dia haingana nitaterana ireo maratra namonjy hopitaly.
Marihina fa ny fiadidiana ny Praiministra daholo no nandray an-tanana ny fandehanana teny amin’ny hopitaly, ny fitsaboana ireo zaza ary ny fanarahana hatramin’izao ny fizotran’ny fitsaboana rehetra mbola mitohy eny amin’ny hopitaly. Tsy misy atahorana intsony ny ain’ireo naratra ireo ankehitriny. Mbola mifandray tsy tapaka amin’ireo fianakaviana ihany koa ny fiadidiana ny Praiminisitra amin’izay mety ho ilaina amin’ny fitsaboana.
II- Andrakitry ny olom-pirenena tsirairay ny fitandremana manokana takian’izay fepetra fiarovana izay : ny fijanonana ao anatin’ny fotoana fohy andalovan’ilay andiana fiara, ny fakàna sisiny, tsy fanapahana ny andiana fiara mandeha mba hisorohana ireny karazana loza ireny. Adidin’ny olom-pirenena hetretra ny mahafantatra izany fitsipika izany.
III- Asiana mandrakariva ny olom-pirenena rehetra mba tsy hanely tsaho na handairan’ny vaovao tsy marina iniana aparitaka amin’ny tranga toa itony, satria ny tsaho aely matetika sy ny tsy fifehezana ny lalàna misy no entina manamarina ny fandikan-dalàna izay atao.
IV- Hamafisina fa tsy ny olona rehetra no afaka mampiasa ireny fepetra manokana amin’ny fifamoivoizana ireny, ary izany no miteraka ny fahasorenana avy amin’ny olom-pirenena noho ny fanararaotana ataona tompon’andraikim-pajakana na olom-boafidy sasany na ireo sokajin’olona tsy manan-jo hampiasa izany. Ampahatsiahivina araka izany fa ireto ihany no sokajy afaka mampiasa ny jiro mirehidrehitra sy ny anjomara : ny lehibena andrim-panjakana, ny mpitandro filaminana, ny fiara mpitondra marary ary ny fiaran’ny mpamonjy voina.
V- Marihina fa efa nisy ny fisamborana ny olona ahiahiana ho tompon’antoka tamin’ny fanimbàna sy fandorana ny fiara sy ny fananam-panjakana omaly ary mbola mitohy ny fanadihadihana eo anivon’ny Sampana misahana ny heloka bevava (Brigade Criminelle). Ny mikasika ny lozam-pifamoivoizana kosa dia ny eo anivon’ny Commissariat Central Tsaralalàna no misahana ny fanadihadiana. Miantso ny rehetra mba ho amin’ny fitoniana sy ny filaminana hatrany anatin’ny toe-javatra tahaka itony.
Antanarivo, 15 septambra 2018
Ny Talen’ny Fiarovana ny Praiminisitra Ny Tale Jeneralin’ny Polisim-pirenena
← Accident de la route
Le Premier ministre au chevet des victimes de l’incendie à Ampefiloha →
Un représentant de l’ONU reçu par le Premier ministre